Home Wararka Raychelle Omamo, Wasiir Dibadeedka Kenya oo Daba joogta Wadahalladii London ee...
Raychelle Omamo, Wasiir Dibadeedka Kenya oo Daba joogta Wadahalladii London ee RW Rooble la yeelatay.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Kenya Raychelle Omamo ayaa lagu wadaa inay booqasho rasmi ah ku timaada Muqdisho maalinta Axadda, sida ay ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay u xaqiijiyeen MOL.
Omamo ayaa la filayaa inay wada-hadallo ku aadan xiriirka labada dal la yeelato RW Rooble oo ay la sheegay inay London isku soo arkeen soona ballameen, kuwaasi oo si gaar ah diiradda loogu saari doono xiriirka diblomaasiyadeed ee labada dal, gaar ahaan arrimaha Dacwadda Badda iyo Guddiga Farsamo ee ay Kenya ka codsatay AU si ay Somaliya ugu qabsato dhulkeeda markaan.
Ilo-wareedyo ka tirsan Villa Somalia, oo MOL u xaqiijiyey imaanshaha Raychelle Omamo, ayaa sheegay in waxyaabaha looga hadli doono kulanka ay ka mid yihiin isu socodka shacabka labada dal, xiriirka ganacsi, iyo xoojinta xiriirka diblomaasiyadeed ee dhowaan dib loo soo celiyo, iyadoo Farmajana si qarsoodi ah ula kulmi doonta una keeni doonta ballanqaad gaar ah.
Kenya ayaa si gaar ah isugu dayeyso in dowladda Soomaaliya ay ka dhaadhiciso inay dib u fasaxdo qaadka dalkaas ka iman jiray oo muddo hakad ku jira, dacwadda badda inay ka tanasusho oo laga wada hadlo xad beenaadka labada dal u dhaxeeya oo ay Kenya qoonsatay 1963, Somaliyana aysan aqoonsan. Waayo waxaa Kenyan nooga maqan dhul iyo Dad (NFD).
Faramjo iyo Rooble waxaan usheegeynaa inaysan danaahooda ku badalan dhul iyo dad Somaliyeed oo aysan danaha Kenya ku fududaan.
Sida aan xogta ku helnay, kulankan ayaan wax shaqo ah ku laheyn arrimaha badda, iyo dhex-dhexaadin la sheegay in Midowga Afrika uu isku dayi doono inuu ka dhex-sameeyo labada dal, sida ay werisay warbaahinta qaar.
Wasiirka Arrimaha Dibedda ee Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud ayaa dhowaan sheegay in dawladda Soomaaliya diiday dhex-dhexaadin ku saabsan muranka xuduudda badda ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya.
Previous articleCabdikariin Guuleed oo aan La Gabban inay Xal tahay in la Boobo Doorashada SL.
Next articleGuddigii Doorashada Somaliland ayaa Talaxumada iyo Degdegga RW Rooble u kala Jebisey Laba Guddi.